Banyere nchekwa na-anọghị n'ịntanetị (OST) Njikwa
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Banyere nchekwa na-anọghị n'ịntanetị (OST) Njikwa
Mgbe ejiri Outlook na Microsoft Exchange Server, ị nwere ike ịtọ ya ka ọ rụọ ọrụ na igbe ozi Exchange na-anọghị n'ịntanetị. N'oge ahụ, Outlook ga-eme nnomi ziri ezi nke igbe akwụkwọ ozi gị na Exchange Server, a na-akpọ nchekwa na-anọghị n'ịntanetị, ma debe ya na faịlụ mpaghara, nke a na-akpọ folda na-anọghị n'ịntanetị faịlụ ma nwere a.ost ndọtị faịlụ. OST bụ ndebiri nke "Isiokwu Nchekwa Na-anọghị n'ịntanetị".
Mgbe ị na-arụ ọrụ na anọghị n'ịntanetị, ị nwere ike iji folda na-anọghị n'ịntanetị rụọ ihe niile dịka ọ bụrụ igbe akwụkwọ ozi na sava ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike izipu ozi ịntanetị nke a na-etinye na Outbox na-anọghị n'ịntanetị, ịnwekwara ike ịnweta ozi ọhụụ site na igbe akwụkwọ ozi ndị ọzọ dị n'ịntanetị, ị nwere ike ịme mgbanwe na ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ dịka ịchọrọ. Otú ọ dị, mgbanwe ndị a niile agaghị egosi na igbe akwụkwọ ozi gị na ihe nkesa Exchange ruo mgbe ị jikọọ na netwọk ọzọ ma mekọrịta folda na-anọghị n'ịntanetị na ihe nkesa.
N'oge usoro mmekọrịta ahụ, Outlook ga-ejikọ na ihe nkesa Exchange site na netwọkụ, detuo mgbanwe niile emere ka folda ndị na-anọghị n'ịntanetị ga-adị ka igbe akwụkwọ ozi ahụ ọzọ. Nwere ike ịhọrọ ịmekọrịta naanị otu folda a kapịrị ọnụ, otu nchekwa ma ọ bụ folda niile. A ga-eji faịlụ ndekọ dekọọ ozi niile dị mkpa gbasara mmekọrịta ahụ, maka nrụtụ aka gị mgbe emechara.
Ebe ọ bụ na Outlook 2003, Microsoft na-ewebata Ọnọdụ Exchange Cached, nke bụ n'ezie nsụgharị nke nchekwa mbido offline mbụ. A na-egosipụta ya na usoro mmekọrịta mmekọrịta dị mma na arụmọrụ na-arụ ọrụ na-adịghị mma.
Anọghị n'ịntanetị nchekwa ma ọ bụ Cached Exchange Mode nwere ọtụtụ uru:
Mee ka o kwe gị omume ịrụ ọrụ na igbe igbe ozi Exchange gị ọbụlagodi enweghị njikọ netwọk dị.
Mgbe ọdachi mere na ihe nkesa Exchange, dị ka nbibi ihe nkesa, nrụrụ nchekwa data nchekwa, wdg, faịlụ nchekwa na-anọghị n'ịntanetị na kọmputa mpaghara ka nwere otu igbe akwụkwọ ozi Exchange gị, yana ụfọdụ mmelite na-anọghị n'ịntanetị. N'oge ahụ, ịnwere ike iji ya DataNumen Exchange Recovery iji weghachite most nke ọdịnaya na gị Exchange igbe akwụkwọ ozi dị site ịgụ isiokwu na nhazi nke data na mpaghara offline nchekwa faịlụ.
Mpempe akwụkwọ na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ, dị ka Outlook folda nkeonwe (.pst) faịlụ, na-adịkarị na folda predefined.
C: WindowsProfilesuser name Obodo Ntuziaka Ngwa DataMicrosoftOutlook
C: Documents na aha njirimara aha obodo Ntuziaka Ngwa DataMicrosoftOutlook
C: Akwụkwọ na Ntọala aha njirimara Ngwa DataMicrosoftOutlook
Maka Windows XP, folda ahụ bụ:
C: Aha njirimara AhaAppDataLocalMicrosoftOutlook
Maka Windows Vista, folda ahụ bụ:
C: Aha njirimara Aha Ntọala Obodo Ngwa DataMicrosoftOutlook
Maka Windows 7, folda ahụ bụ:
C: Aha njirimara aha njirimaraAppDataLocalMicrosoftOutlook
I nwekwara ike chọọ faịlụ “*.ost”Na kọmputa gị iji chọta ebe faịlụ ahụ dị.
The OST faịlụ ahụ bụ mpaghara mpaghara gị igbe akwụkwọ ozi Exchange, nke nwere ihe niile most data nkwukọrịta ozi dị mkpa na ozi, gụnyere ozi ịntanetị, folda, posts, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ, ndetu, wdg nsogbu dị iche iche na igbe akwụkwọ ozi gị ma ọ bụ folda na-anọghị n'ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, ihe nkesa Exchange na-akụ ma ọ bụ ịnweghị ike ịmekọrịta mmelite na-anọghị n'ịntanetị na ihe nkesa ahụ, anyị na-akwado gị ka ị jiri DataNumen Exchange Recovery iji weghachite data niile na ya.
Microsoft Outlook 2002 na nsụgharị ndị mbụ jiri ochie OST Ọkpụkpọ faịlụ nke nwere oke nha faịlụ nke 2GB. The OST faịlụ ga-emerụ mgbe ọ ruru ma ọ bụ karịa 2GB. Ị nwere ike iji DataNumen Exchange Recovery ka i scanomi oversized OST faịlụ na tọghata ya na faịlụ PST na usoro Outlook 2003 nke enweghị oke nha faịlụ faịlụ 2GB, ma ọ bụ kewaa ya na otutu faili PST pere mpe karia 2GB ma ọ bụrụ na ịnweghị Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị ndị arụnyere karịa.